Akwụkwọ akụkọ sayensị kacha mma
Nyocha akụkọ ifo akụkọ sayensị
3 akwụkwọ kacha mma nke James Graham Ballard dere
Ọkara n'etiti Jules Verne na Kim Stanley Robinson, anyị na -ahụ onye edemede Bekee a nke na -akọwapụta echiche dị iche iche na ụwa anyị nke onye ama ama izizi e hotara na ebumnuche dystopian nke onye edemede nke abụọ ugbu a. Maka ịgụ Ballard bụ ịnụ ụtọ atụmatụ yana isi nke narị afọ nke iri na iteghete mana ...
Akwụkwọ Kim Stanley Robinson 3 kacha elu
Akụkọ ifo sayensị (ee, yana mkpụrụedemede ukwu) bụ ụdị jikọtara ndị nkịtị nwere ụdị echiche efu na -enweghị uru karịa naanị ntụrụndụ. Site na naanị ihe atụ nke onye edemede m na -ewetara ebe a taa, Kim Stanley Robinson, ọ ga -aba uru ịkwatu echiche ndị ahụ na -edochaghị anya banyere ...
Ihe mgbagwoju anya, nke Richard Powers dere
Ụwa apụọla ụda ya mere mgbagwoju anya (ndo maka egwuregwu ahụ). Dystopia na-eru nso n'ihi na utopia na-adịkarị anya maka mmepeanya dịka nke anyị nke na-abawanye ụba n'ọnụọgụ ka njirimara nkịtị na-ebelata. Individualism bu pụta ụwa ịbụ. ...
3 akwụkwọ Robin Cook kacha mma
Robin Cook bụ otu n'ime ndị ode akwụkwọ akụkọ ifo sayensị wetara ozugbo na ngalaba ọgwụ. Ọ dịghị onye dị mma karịa ya ka hypothesize banyere iche iche ga-eme n'ọdịnihu banyere mmadụ, na ihe ọmụma nke mkpụrụ ndụ ihe nketa dị ka na tụụrụ ohere maka echiche niile na agba. Anaghị agụta ihe ga-ekwe omume…
Nwa nwoke na nkịta ya na njedebe ụwa, nke CA Fletcher dere
Ụgha akụkọ mgbe ochie na-abụkarị akụkụ abụọ nke mbibi zuru oke na olile anya maka ịlọ ụwa. N'ọnọdụ a, Fletcher na -adọta ihe osise ndị na -akọwa nke ọma etu o siri ruo ebe ahụ dị ịtụnanya ebe ndị lanarịrị na -ahụ maka iwughachi ụwa ha ...
3 akwụkwọ Aldous Huxley kacha mma
Enwere ndị edemede na -ezo n'azụ ọrụ ha kacha mma. Nke a bụ ihe gbasara Aldous Huxley. Ụwa obi ụtọ, nke ebipụtara na 1932 mana nwere agwa na -adịghị agwụ agwụ, bụ ọkaibe nke onye ọ bụla na -agụ na -amata ma jiri kpọrọ ihe. Akwụkwọ akụkọ akụkọ sayensị dị oke egwu nke na -abanye na mmekọrịta mmadụ na ndọrọ ndọrọ ọchịchị, na ...
Hapụ ụwa n'azụ, nke Rumaan Alam dere
Ịgbaga na Long Island ezughi oke maka ihe na -esote. Ị nwere ike ịbara gị uru ma ọ bụrụ na ị nwaa kwụsịlata nchekasị ka ị lụchara ọgụ siri ike na New York City; mana ọ bụ atụmatụ ọjọọ ma ọ bụrụ na ọ bụ njedebe ụwa, apocalypse ma ọ bụ ...
Na -abịaru nso… Ozi Ọdịnihu, Kim Stanley Robinson
Site na ozi ịhụnanya George Orwell ruo Ozi Oge, usoro na -adịbeghị anya nke meriri na TVE. Ajụjụ a bụ ijikọ ministri na dystopian, akụkụ ọdịnihu yana ebe dị njọ ...
Agụụ, nke Asa Ericsdotter dere
Ihe egwu dị egwu bụ dystopias nke ihe nwere ike ịbụ. N'ihi na ụzọ dystopian nwere akụkụ akụrụngwa mmekọrịta ọha na eze mgbe niile. Ihe niile kpughere nye iwu ọhụrụ ahụ na mbọ nnupu isi ya na ido onwe ya n'okpuru egwu. Site na George Orwell ruo Margaret Atwood, ọtụtụ nnukwu ndị edemede ...
Oryx na Crake, nke Margaret Atwood dere
Mwepụta nke akụkọ akụkọ sayensị na-egosi na enweghị akụkọ ọhụrụ nke ga-enye echiche dị n'etiti dystopian na post-apocalyptic ka ọ dabara n'oge. Naanị Margaret Atwood abụghị onye edemede akụkọ sayensị mgbe niile. Maka ya, scenography na -esonyere echiche karịa ...
Anomaly, nke Hervé Le Tellier dere
Ụgbọ elu bụ ala (ma ọ bụ ihu igwe) akọ maka ịkọ nkọ akụkọ ifo sayensị. Naanị otu onye ga -echeta akụkọ ifo nke Bermuda Triangle, nke n'oge na -adịghị anya loro ụgbọ mmiri dịka ndị na -alụ agha, ma ọ bụ langoliers nke Stephen King ndị na-eripịa ụwa ...
Peeji1 Peeji2 ... Peeji5 Ọzọ →